Indlela iBlog nyilvánosságra hozza az i-Real Estate Properties kwi-2015-et
Ipropati yewebhu ifana nepropati yepropati apho umntu anakho. Xa kuziwa kwipropati yewebhu, ngokucacileyo umxholo kunye noyilo oludalwe ngumntu okanye inkampani kwimimandla, kwiimidiya zentlalo nakwiindawo zentlalo yoluntu.
Njengempahla ebonakalayo, ibhulogi kufuneka ikhule ngexabiso ngelixesha, mhlawumbi kwinani labantu elifikelela kuyo yonke imihla okanye kwisixa semali engenayo. Kwihlabathi eligqibeleleyo, lifezekisa zombini iinjongo kunye neenjongo zengeniso.
1 Iingxabano Ngaphandle kweNdawo te-Intanethi
1.1 IfowuniDog ngokumelene noKravitz
1.2 I-Eagle noMorgan
2 Ixabiseke Njani Impahla Yakho Yewebhusayithi?
3 Ukwandisa ixabiso leBlog yakho
4 UkuPhucula isiGqeba
Iingxabano Ngaphandle kweNdawo te-Intanethi
Ukugqiba ukuba ngubani ophethe ipropati ye intanethi ngokuqhelekileyo ulungele ngqo. Omnye uthabatha igama lokubhalisa igama lesizinda kwaye uyahlawula iifizi zokubamba. Nangona kunjalo, kukho iimeko zamatyala ezenza ukuba kucace ukuba abanikazi bewebhusayithi kufuneka baqaphele kakhulu ukuseka nokugcina ubunini babo bhulogi kunye namaphepha eendaba ezentlalo ambulumene nelo bhulogi.
IfowuniDog ngokumelene noKravitz
Kuqhelekileyo kubaqeshi ukutyumba umntu kwinkampani ukudala nokugcina ii-akhawunti zentlalo. Nangona kunjalo, kwimeko IfowuniDog, umqeshwa wadala i-akhawunti kwaye wayigcina emva kokuba umsebenzi wakhe unqanyulwe.
I-phoneDog iyatsho ukuba i-akhawunti yemidiya yoluntu yinkampani impahla activbonakaliyo ngelixa uKravitz echaza ukuba wadala kwaye wakha iphepha lokuzonwabisa loluntu kwi-Twitter kwaye ngoko ke.
Yintoni onokuyifunda kule nto?
Ngoxa unokumisela umqeshwa ukuba agcine iphepha lakho leendaba ezentlalo, kulungile ukudala i-akhawunti yokuqala ukuba ugcine ubunini.
Musa ukubopha igama lomsebenzi kumaphepha eendaba ezentlalo. Üdvözöljük, ha szeretnéd meghallgatni a @PhoneDog_Noah. Ukuba inkampani inyanzelise kuphela, ityala belinokugqitywa ngokukhawuleza.
Kwesinye imeko enomdla, inkampani yathenga umfazi ngegama le-Aagle kwaye yamqesha ixesha elithile. Én-LinkedIn ukuba i-Aagle yayisebenzisayo yayibophelelwe kwinkampani kunye neminqweno yakhe.
Xa la maqela mabini aphelayo ubudlelwane bawo, uMorgan wabamba ulawulo lwe-akhawunti ye-LinkedIn kwaye wala ukuvumela i-Eagle ukuba ibe nolawulo kuyo, esithi yayiyinxalenye yepropathi yenompisa kwaye yogeno.
Az Isigqibo kulo mzekelo sasinomdla, az iagundla zifumene ukuba i-Aagle ngokwenene yenza i-akhawunti yakhe ye-LinkedIn. Nangona kunjalo, abazange banikeze umonakalo njengoko kwakungenakwenzeka ukubonakalisa nayiphi ilahleko yengeniso ngenxa yokuthathwa kwe-akhawunti.
Impazamo enkulu ka-Eagle yayikukunikezela ulawulo lwe-akhawunti yakhe ngokwabelana ngephasiwedi kunye nabanye abasebenzi abamncedayo ukuba bamkele izicelo zonxibelelwano kwaye bagcine i-akhawunti.
Unganiki nabani ukuba afikelele kwiiakhawunti zakho zobuqu okanye zeshishini. Ukuba ufuna uncedo, tshintsha iphasiwedi yakho ngaphambi kokuphelisa ingqesho. Ukuba ungumqeshwa, yala nje ngentlonelo ukuba wabelane ngalolu lwazi.
Nangona inkundla ifunyenwe kwi-Aagle, yalahlekelwa inyanga yoxhumo kunye nenzuzo engenako ngenxa yokuba ikhutshwe kwiakhawunti zayo.
Gcina ukwahlukana kwee-akhawunti kunye ne-akhawunti, ingakumbi ukuba usebenzela omnye umntu.
Ixabiseke Njani Impahla Yakho Yewebhusayithi?
Nangona ukulahlekelwa kweakhawunti yakho yeendaba yoluntu kuphazamisayo, ukubaluleka kwexabiso le-intanethi yakho mhlawumbi akunakwenzeka ukulinganisa. Ezinye zewebhusayithi ezibiza kakhulu kwihlabathi zixabiswa kwizigidi.
Nangona kunjalo, ukuba akukho mntu uzimisele ukuhlawula izigidi ukuthenga lewebhu, ngoko ke ukulinganisela ukuba umnini mhle. Ezimbalwa iiwebhusayithi zithengise oko kukufanelekile, nangona kunjalo.
SEO.com – Összesen 5 USD vásárlás.
I-Toys.com – I-ToysRU ihlawulwe kwe-5 yezigidi ze-domain kule 2009.
Hotels.com – Válassza ki a (z) yazisa domain nevét – $ 11, yweigidi emva kwe-2001.
I-VacationRentals.com – Umsunguli we-HomeAway i-domain nge-35 yezigidi zeedola ngokulula ukuze ayikhuphe kwizandla zokhuphiswano i-Expedia.
Ngelixa igama le-domain lingaba nelungelo lemali encinci, yintoni enzima ukulinganisa ixabiso leendwendwe eziza kuloo sayithi kwaye zinokukwazi ukuziguqula kubaxhasi.
Ukwandisa ixabiso leBlog yakho
Kanye njengakwindawo ethengisa izindlu nomhlaba, amaxabiso anokwahluka kuye wonke umntu. Indlela olilinganisa most ixabiso leblogi yakho ixhomekeke kwinjongo zakho zebhlog yakho. Kwindlu ethengiswayo, ixabiso lekhaya lilinganiswa ngabantu abafuna ukuthenga loo ndawo.
Umzekelo, enye usapho inokunyamekela ngakumbi ukuba kukho izikolo ezilungileyo kwindawo ngelixa enye ifuna inani elithile lokuhlamba. Umzekelo, ngaba ufuna ukufikelela kubafundi? Ke, umlinganiselo wakho unokuba ungakanani kubafundi abafunde kwaye baphendule kwizithuba. Náci ezinye zeendlela onokuthi ulilinganise ixabiso lebhlog yakho:
Inani lezithuba zeblogi
Nje ukuba uqonde umlinganiselo oyixabise ngayo ibhlog yakho, uya kuba nakho ke ukulonyusa eloxabiso.
Ukwandisa abaTyeleli: Ukuqhuba ukugcwala kwi-blog yakho kunokuba lula ukuba uthethe kunokuba kwenziwe kwaye kuhlala kunesiphumo sezinto ezahlukeneyo. Inye bele oya kuyifuna ukuyenza kukwandisa igama lomlomo. Xelela usapho kunye nabahlobo malunga nebhlog yakho. Thumela amakhonkco kwimidiya yoluntu. Uya kufuna kwakhona ukufunda isithuba sikaVishnu Supreet Ukhuthazwe ii-plugin ze-SEO KwiiWebhusayithi ze-WordPress kwi-2015 ukufumana ezinye iingcamango.
Ukwandisa ukuguqulwa kweentengisoUkufumana iindwendwe kwibhlog yakho kuphela kwesiqingatha sedabi. Ukuba ufuna ukwenza imali ibhlog yakho, ke kuya kufuneka ufumane abo bafundi ukuba bacofe kwikhonkco lokubhaliswa kweleta okanye uthenge imveliso. Funda isikhokelo esineenkcukacha sikaLuana Spinetti esineenkcukacha malunga nokuguqulwa kokwakha kunye nokunyaniseka okunesihloko I-37 Elements of Engagement User – UX, Ukuguqulwa, Ukunyaniseka ngeengcamango kule ngongoma yeblogi yakho.
Ukwandisa usetyenzisoIphepha lokukhangela elingaphambili ingyen online yogukhangela kaGoogle linkek, amelyek a yi-ingatlanhoz kapcsolódnak. Ukuba iwebhusayithi yakho ayinakubekwa kwindawo ezintlanu eziphezulu okanye ezintandathu kwindawo yakho ye-niche, ngokuqinisekileyo awuyi kufumana ukugcwala okukhulu kuGoogle. Ukonyusa inqanaba lakho lweinjini yokukhangela ngumsebenzi onzima. Az UGoogle az utshintsa abayifunayo phantse yonke imihla, nem tudja megtenni. Írja be az esebenzayo ngoku kwaye enokuthi isebenze kwixesha elizayo, nangona kunjalo, kukubhala umxholo ogqwesileyo.
Ukwandisa i-backlinks: Ukuba awufuni ukuthembela kuGoogle Okanye kuyo nayiphi in yoin yokukhangela kuyo yonke itrafikhi yakho, ke ukutyala ixesha elithile ekwakheni i-backlinks smart. Ezinye zeendlela onokonyusa i-backlinks zibandakanya ukuphawula ezinye iibhlog (qiniseka ukuba ingxelo yakho iluncedo kwaye ayisixekile), isebenza njengebhlog yeendwendwe, kunye nokunxibelelana nabanye. Qiniseka nje ukuba iisayithi ezinxibelelana nawe ziziza ezisemgangathweni nazo.
Kwi-ingatlan, kukho lawula iminyaka emihlanu othi ufanele uthengise indlu yakho kwaye uhlaziywe kwixabiso elibiza ngaphezu kweminyaka emihlanu okanye njalo. Le festile ikuvumela ukuba wenze inzuzo enkulu kwikhaya lakho kwaye uphucule ukuya kwelona likhulu ngemali encinane. Emva kwexesha, kwaye emva kokuphuculwa kwamanani amaninzi, uya kuba kwikhaya elikhulu ngeendleko ezifanayo, ucinga ukuba ulinganisa ubulungisa bakho ngexesha ngalinye.
Ungasebenzisa umjikelezo wokuphucula kwiwebhusayithi yakho, kodwa khumbula ukuba i-intanethi ihamba ngesivinini se-warp xa kuthelekiswa nobomi boqobo. Kungcono kakhulu ukuphucula ibhulogi yakho emva kweenyanga ezintandathu ukuya kunyaka wokukhula okuphezulu.
Hlaziya amaphepha akho. Ziziphi ezona zithuthi? Yiyiphi enye inokufumana ubuncinci? Ngaba kukho nawuphi nayaya kuphuculiswa, ahlaziyiweyo okanye apheliswe?
Yongeza az entsha-ba. Enye yezinto ezinzulu malunga nokuthenga indlu entsha ufumana ibhantshi elinamanzi elwandle okanye i-pool-in-ground. Ungayongeza njani ibumbi elisezantsi kwiwebhusayithi yakho? Yintoni az entsha kunye nokusika ongayongeza ukuba akukho mntu wenzayo okwamanje?
Yongeza "kwintsapho yakho." Enye yezinto eziphuculweyo ukuphucula indlu enkulu kukukwazi ukukhulisa ubungakanani bentsapho yakho, unomnye umntwana, okanye uhambe kumzali osekhulile. Ungayongeza njani kwintsapho yakho yoshishino? Ngaba kufuneka uqeshe umbhali ukuze udale iiposi ze-blog ze-10 ngeveki esikhundleni se-5? Mhlawumbi ufuna i-PR ingcali ukukunceda ukhuthaze indawo yakho? Khangela iindlela zokongeza kwintsapho yakho.
Ngeendlela ezininzi, ibhlogu ifana nearhente yokuthengiswa kwezindlu. Yinto oyityala imali kuyo kwaye ufunde ukuyithanda ngokuhamba kwexesha. Ngokulandela le migaqo elula, uya kuphumelela ngebhlog yakho kwaye, ngandlela-thile, inokude ibe yeyona nto ibalulekileyo kuwe kunekhaya lakho.
IndLela iBlog ibonisa oggi i-Real Estate Properties kwi-2015
Ipropati yewebhu ifana nepropati yepropati apho umntu anakho. Xa kuziwa kwipropati yewebhu, ngokucacileyo umxholo
Indexela iBlog ibonisa ngayo i-Real Estate Properties kwi-2015
Indlela iBlog ibonisa ngayo i-Properties Properties kwi-2015
Indlela iBlog ibonisa ngayo i-Properties املاک kwi-2015
Ipropati yewebhu ifana nepropati yepropati apho umntu anakho. Xa kuziwa kwipropati yewebhu، ngokucacileyo umxholo
Interjú a Web Host segítségével a HostMetro Managerrel, Kyle Dolannal
Ulasan dari Dummies: Dummies: Tambahkan ke teman-teman Anda pada tahun 2020 شروع کنیم
وبلاگ نویسی برای Dummies: مانند یک وبلاگ موفقیت را در سال 2020 شروع کنید
Hoe’t jo in útsûnderlike ब्लॉग पोस्ट opnimme de wrâld brekt (yn en b yten it) के रूप में
Sida loo dhiso Vefsíða-ga velgengni fasteigna
თუ გსურთ გამოიყენოთ IP მისამართები? Apsaugokite savo privatumą internete
Málsrannsóknir: 20 leiðir til að auka viðskiptahlutfall á vefsíðum
Itọsọna pípa gaman Atilẹyin akoonu atijọ
Blog Quam ut Reperio Ius Angulus enim tuus
ბლოგინგი არის Dummies: თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი დღიური 2020 წლისთვის
Chatbot fyrir fyrirtæki þitt: Chatfuel, Verloop, Margir spjall og Gupshup samanborið
چگونه وبلاگ خود را از WordPress.com به یک دامنه خود میزبان منتقل کنید
Triberr Marketing: consigli interni di 25 esperti + intervista esclusiva
Tista ‘tuża dik ir-Ritratt; Fehim Użu Ġusta u Liema ritratti jistgħu u ma jistgħux jintużaw b’mod legali fuq il-Blog Tiegħek
فيس يين وسو هاهيو ؟هي ڪئ
Njira Zitatu Zosavuta Kukhazikitsa אתר: Gawo ndi Gawo Woyambira Buku
Google SEO Marketing et CHORDUS – Cogitatio enim 4 Victus
Kickassd: Enemmän kuin vain vilkasta nopeaa Web Host -suorituskykyä
ब्लॉगर्स के लिए ईमेल आउटरीच – 5 सफल संदेश जो रिश्ते बनाते हैं
Hogyan lehet létrehozni egy postai képgalériát a WordPress-en
24 Aranyszabály a közösségi média forgalmazói és bloggerei számára
Pregled medijskog hrama
Μια ματιά στο Cloudways: Το PaaS για μικρές επιχειρήσεις
Malebela a 15 a sebetsang a ho ntlafatsa, הו khothaletsa le ho fumana sephethephethe se eketsehileng ho blog ea hau kajeno
[Nyochaa] Ònye nhe iach kacha mma na-eto eto Hacking Ngwaọrụ;
پیکربندی افزونه W3 Caching: تنظیمات عمومی
Bloggað fyrir Dumams: Sida Loo Bilaabo Blogg Guul Ah 2020
Pehea e hoʻomaka ai i kahi Blog meaʻai mi WordPress
نحوه دسترسی به وب تاریک: مرور وب تاریک ، مرورگر TOR و وب سایت های Onion
क्वेन, क्यू, ओनडे, कैंडो ई पोर एस्क्रेबिमोस एक्सेलेंटेस ब्लॉग
Επτά από τις πιο ανόητες δυνατότητες Web Hosting
Haastattelu Web Host: WebHostFace toimitusjohtaja, Valentin Sharlanov
Pro nullam dolore, quem ad modum gest sunt בבלוג MMXX
Ny fijerena ny fomba famakiana ny lahatsoratra dia miaraka amin’ny Στατιστική αναγνωσιμότητα Word
Nzira Yekuyeukwa Uye Kuita Mari. Una guida ku Smart Branding
סקירת צבע מארח
वर्डप्रेस में विभिन्न भाषाओं को जोड़ना
מדריך עסקי לחסויות בלוגים וקידום אתרים
Gunakan Google rokasgrāmata, dan Google karti vietnē WordPress
מצא דוא”ל אירוח מיטבי ולמד כיצד להגדיר את הדוא”ל העסקי שלך
Sidee loogu daraa Taariikhda Google ee verkkosivusto-ka WordPress
Vim: Κάνοντας τη ζωή ευκολότερη για τους κωδικοποιητές βοηθώντας τα παιδιά στην Ουγκάντα
Kesalahan Tata Bahasa Umum dan Cara Menghindarinya di Blog Anda
I-5 Inyathelo Yokubhala Ibhulogi Y-Blog ethi Goes Viral
Bloggaðu um Dummies: Me pehea te Tímata í te Blog Blogg árið 2020
Podijelite ovu igru ​​Crni: مرور وب تاریک ، مرورگر TOR و وب سایت های .Onion
Wawancara Host Web: T&J dengan CEO CloudAccess.net Jonathan Gafill
Kuluttakaa loppuun Creative Quid Gravis -tuotteen alla
بهترین هاستینگ وردپرس در مقایسه (2020)
A WordPress bemutatója: Kamoo U ka Bōpa Sebaka a WP-hez, ha a Moqolo
שם תחום עבור בובות: Tingatenga Sei Zita reZita
Ενημέρωση Ιουνίου: Litlhahiso tsa Mecha ea Sechaba, Ho Ngola Hacks, le Tlhahlobo ea Botho
איך גודדי מרוויח כסף
Ný fijerena ny fomba famakiana ny lahatsoratra dia miaraka amin’ny Tölfræðilegur læsileiki Orð
Fanadinadinana amin’ny tranonkala: WebHostFace toimitusjohtaja, Valentin Sharlanov
Kuinka Tristan Hervouvet rakensi ImageRecycle-kuvan 0 – 1 000 000 000 kuvaa
9 legjobb Kaca játék, Naon Tiasa Anjeun Diajar tina eta
30 consigli di Blogger su come far crescere i lettori di blog
Google SEO i slučaj MyBlogGuest – Vrijeme je za vraćanje uloga!
Yadda za un Dakatar da masu ba da labari un kan shafin yanar gizonku
Litla eik hýsingarfrétta
چگونه می توان از کنفرانس های تلفنی رایگان برای ساخت مخاطبان آنلاین خود استفاده کرد
Τα μυστικά της συγγραφής ακαταμάχητων αναρτήσεων ιστολογίου
Blog di mannekeenide: kuidas käivitada 2020. aastal edukas ajaveeb